Manchester United Oo War Farxad Leh Usoo Yeedhay Ka Hor Ciyaarta Barcelona Iyo Xiddigo Muhiim Ah Oo Usoo Laabtay - Cadalool.com
Manchester United Oo War Farxad Leh Usoo Yeedhay Ka Hor Ciyaarta Barcelona Iyo Xiddigo Muhiim Ah Oo Usoo Laabtay
Manchester United ayaa war farxad leh usoo yeedhay ka hor ciyaarta ay habeen dambe martida ugu noqonayaan Barcelona oo lugta labaad ee wareegga siddeed dhamaadka ay foodda isku dari doonaan garoonka weyn ee Camp Nou.
Red Devils oo kulankii hore 1-0 lagaga adkaaday iyadoo joogta garoonkeeda Old Trafford ayaa dib u helaysa saddexda laacib ee Ashley Young oo dhalliilo badan loo jeediyey lugtii hore laakiin ciyaartii Sabtidii ka maqnaa, Alex Sanchez oo muddo dheer garoomada ka maqnaa iyo Nemanja Matic oo kasoo laabtay dhaawac uu ku dhowaad laba toddobaad u jiifay.
Young oo ganaax kaga maqnaa kulankii ay kooxdiisu 2-1 kaga adkaatay West Ham United ayaa waxa uu canaan badan ku mutaystay qaab ciyaareedkii uu muujiyey lugtii hore ee Barcelona ay ku martigeliyeen, waxaana xilligaas ay jamaahiirta United dalbadeen in si degdeg ah loo burburiyo qandaraaskiisa oo laga caydhiyo kooxda, hase yeeshee soo laabashadiisa ayaa haddana niyad-samaan siisay tababare Ole Gunnar Solskjaer oo mar kale ku aaminaya difaaca midig.
Sidaas oo kale, Alexis Sanchez iyo Nemanja Matic ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxda, waxaanay isku diyaarinayaan safarka ay kooxdoodu maanta ku tegayso dalka Spain, laakiin Ander Herrera ayaa seegaya ciyaartan oo wali la dhibaatoonaya dhaawac.
Tababare Solskjaer ayaa xaqiijiyey in Matic uu ka mid noqonayo kooxdiisa safarka gelaysa, balse magaalada Manchester uu kaga tegi doono Herrera.
“Nemanja hubaashii wuu nala safrayaa, laakiin Ander nama raacayo. Muddo kale oo yar ayuu sii maqnaan doonaa.” Sidaas ayuu yidhi Solskjaer.